नमूना स्वास्थ्य केन्द्र: चिकित्सक छैनन्, स्थानीयवासीलाई सास्ती ! - लोकसंवाद
नमूना स्वास्थ्य केन्द्र: चिकित्सक छैनन्, स्थानीयवासीलाई सास्ती !
पुष २०, २०७६
बाजुरा । पूर्वीउत्तरी क्षेत्रको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चार महिनादेखि चिकित्सकविहीन बनेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक गणेश चौधरी समायोजन भइ अन्यत्र गएपछि स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन बनेको हो।
हिमाली गाउँपालिका–७ बाधुको कालापडा भिरबाट सडक दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएकाको शव स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको चार दिन भएको छ । चिकित्सकको पर्खाइमा आफन्तजन रहेका छन् । तर शव परीक्षण हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा आफन्त चार दिनदेखि शव कुरिरहेका छन्। शव सडिने अवस्था पुगिसकेका छन्। ‘कोल्टीमा चिकित्सक भएको भए बिहीबार नै शव परीक्षण गरेर आफन्तले काजकिरीया सुरु गरिसक्थे । आजसम्म शव कुरिरहनु पर्दैनथ्यो’ नागरिक अगुवा जनेश भण्डारीलले भन्नुभयो ।
चिकित्सक नहुँदा बाजुराका उत्तरी क्षेत्रका चार स्थानीय तह र छिमेकी जिल्ला हुम्ला, कालिकोट र मुगुका जनतालाई सास्ती भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ८० बिरामी उपचारमा आउने गरेका छन् । चिकित्सक नभएकै कारण नेपालगञ्ज, मार्तडी सिफारिश गर्नुपरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीले जनाएको छ।
नमूना स्वास्थ्यचौकीका रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ । बूढीनन्दा नगरपालिका–१ का बडा अध्यक्ष नृपराज खत्रीले नमूना स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुँदा उपचारका लागि महङ्गो हवाईभाडा तिरेर नेपालगञ्ज जानुपर्ने बिडम्बना रहेको बताउनुभयो।
वर्षात्ले मार्तडी कोल्टी अवरुद्ध हुँदा समदरमुकाम मार्तडीलगायत अन्य ठाउँमा लैजान पनि समस्या भएको छ । बाजुराको हुम्ला, मुगु र कालिकोटका ५० हजार जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य केन्द्रले सेवा दिँदै आएको छ।
यता जिल्ला अस्पताल बाजुरामा पाँच जना चिकित्सक छन्, तर उनीहरुलाई पठाउन प्रशासन तथा अन्य निकाय कतैबाट पहल नभएपछि चिकित्सक नगएको जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा रुपचन्द्र विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
जिल्ला अस्पताल बाजुराले परीक्षणका लागि डा राजु जोशीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली शनिबार बिहान मात्र कोल्टी क्षेत्र पठाएको छ । कालापडा भिरबाट कर्णाली नदीमा बिहीबार जिप खस्दा चार जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो ।
जिप हिमाली गाउँपालिकाको धुलाचौरबाट कोल्टीतर्फ आउँदै गरेको से१ज १०६४ नम्बरको जिप दुर्घटना भएर कर्णाली नदीमा खसेको थियो ।